Sriyog.Com - Disclaimer
१५ डिसेम्बर २०१९ बाट सुरु
यदि तपाईंलाई थप जानकारीको आवश्यक छ वा हाम्रो साइटको अस्वीकरणको बारेमा केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया enquiry@sriyog.com मा ईमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
यस वेबसाइटको सबै जानकारी - www.sriyog.com - राम्रो विश्वास र सामान्य जानकारी उद्देश्यको लागी प्रकाशित गरीएको छ । Sriyog.Com यो जानकारीको पूर्णता, विश्वसनीयता र शुद्धताको बारेमा कुनै ग्यारेन्टी गर्दैन । तपाइँले यस वेबसाइटमा फेला पार्नु हुने जानकारीमा लिने कुनै पनि कार्य (Sriyog.Com ) तपाईको आफ्नै व्यक्तिगत विश्लेषणमा पर्दछ । श्रीयोग कन्सल्टिंग प्रा.लि. कुनै पनि घाटा र / वा हाम्रो वेबसाइटको उपयोगको सम्बन्धमा क्षतिको लागि उत्तरदायी हुने छैन ।
हाम्रो वेबसाइटबाट तपाईं अन्य वेबसाइटहरू हाइपरलिंकहरू पछ्याएर त्यस्ता बाह्य साइटहरूमा भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ । जबकि हामी उपयोगी र नैतिक वेबसाइटहरूमा केवल गुणस्तरको लिंकहरू प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछौं । हामीसँग यी साइटहरूको सामग्री र प्रकृतिमाथि कुनै नियन्त्रण छैन । अन्य वेबसाईटहरूमा यी लिंकहरूले यी साइटहरूमा फेला परेका सबै सामग्रीहरूको लागि सिफारिसलाई संकेत गर्दैन । साइटका संचालन र सामग्री सूचना बिना नै परिवर्तन हुन सक्छ र हामीसँग लिंक हटाउने अवसर पाउनु अघि यो 'खराब' भएको हुन सक्छ ।
कृपया यो पनि सचेत रहनुहोस् कि जब तपाइँ हाम्रो वेबसाइट छोड्नुहुन्छ, अन्य साइटहरूको बिभिन्न गोपनीयता नीति र सर्तहरू हुन सक्छन् जुन हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि यी साइटहरूका गोपनीयता नीतिहरू साथै उनीहरूको "सेवा सर्तहरू" कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न हुनु वा कुनै जानकारी अपलोड गर्नु अघि जाँच गर्नुहोस् ।
प्रयोग र जानकारीको संग्रह
हामी जानकारीहरू संकलन गर्न सक्छौं ।मानिसहरूले कसरी हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गर्छन् ("डेटा प्रयोग") यस उपयोग डेटाले विभिन्न जानकारीहरू समावेश गर्दछ जस्तै तपाईंको कम्प्युटर आईपी, ब्राउजर विवरणहरू, सेवाहरूको पृष्ठ, तपाईंले नेभिगेट गर्ने पृष्ठहरू, समय टिकट तपाईं पृष्ठहरूमा रहनुहुन्छ, तपाईंको संलग्नता, यूडीआईडी इत्यादि ।
ट्र्याकिंग र कुकीज डेटा
कुकीहरू र समान ट्र्याकि टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गरेर हामी हाम्रो सेवाहरूको गतिविधिहरू ट्र्याक गर्छौं र केही जानकारी राख्छौं । कुकीज डाटाको सानो मात्राको साथ फाईलहरू हुन् जसले अज्ञात अद्वितीय पहिचानकर्ताहरू समावेश गर्न सक्दछन् र वेबसाइटबाट तपाईंको ब्राउजरहरूमा पठाइन्छ र तपाईंको उपकरणहरूमा भण्डारण गरिन्छ । ट्र्याकिंग टेक्नोलोजीहरू हाम्रो सेवाहरू सुधार गर्न मद्दत ट्र्याक गर्न जानकारी संकलनगर्न ट्याग र स्क्रिप्टहरू प्रयोग गर्दछ । तपाइँको ब्राउजरलाई सबै कुकीहरू अस्वीकार गर्न वा कुकीहरू निगरानी गर्न निर्देशन दिईन्छ । जहाँसम्म, यदि तपाइँ कुकिजहरू स्वीकार गर्नुहुन्न भने, तपाइँ हाम्रा सेवाहरूको केहि अंशहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाइँको उपलब्ध कुकिजमा निर्भर हुन सक्छ ।
हामीले प्रयोग गर्ने कुकीहरूको उदाहरण:
सेसन कुकिज –सेसन कुकीहरू हाम्रो सेवाहरू सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
प्राथमिकता कुकीज - प्राथमिकता कुकीहरू तपाईको प्राथमिकता र बिभिन्न सेटिंग्स सम्झन प्रयोग गरिन्छ ।
सुरक्षा कुकिज - सुरक्षा कुकीज सुरक्षा उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
Sriyog.Com ले विभिन्न उद्देश्यका लागि संकलित डाटा प्रयोग गर्दछ:
सेवा प्रदान गर्दै र मर्मत गर्दै ।
हाम्रो सेवामा परिवर्तनहरूको बारेमा तपाईंलाई सूचित गर्दै ।
तपाइँलाई हाम्रो सेवाको अन्तर्क्रियात्मक सुविधाहरूमा भाग लिन दिँदै ।
ग्राहक सेवा र समर्थन प्रदान गर्दै ।
विश्लेषण वा मूल्यवान जानकारी प्रदान गर्दै ताकि हामी सेवा सुधार गर्न सक्दछौं ।
सेवाको उपयोग अनुगमन ।.
पत्ता लगाउने, रोक्ने र टेक्निकल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै
सेवा प्रदान गर्न र मर्मत गर्न ।
हाम्रो सेवामा परिवर्तनहरूको बारेमा तपाईंलाई सूचित गर्न ।
तपाइँलाई हाम्रो सेवाको अन्तर्क्रियात्मक सुविधाहरूमा भाग लिन दिन ।
ग्राहक सेवा र समर्थन प्रदान गर्न ।
सेवाको उपयोग अनुगमन गर्न ।
पत्ता लगाउने, रोक्ने र टेक्निकल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न ।
तपाईंको जानकारी व्यक्तिगत डाटा सहित, सर्वरमा स्थान्तरण हुन सक्छ र सर्भर कम्प्युटरहरूमा व्यवस्थित हुन सक्छ ।
यदि तपाईं नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र हामीलाई जानकारी प्रदान गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, कृपया बुझ्नुहोस् कि हामी तपाईंको डाटा नेपालमा हाम्रो सर्वरमा हस्तान्तरण गर्दछौं र त्यहाँ प्रशोधन गर्दछौं ।
तपाइँको गोपनीयता नीतिसँग तपाइँको सहमति सहित तपाइँले यस प्रकारको जानकारी पेश गर्नुको मतलब तपाइँ त्यो स्थानान्तरणसँग सहमत हुनुहुन्छ ।
श्रीयोग कन्सल्टिंग प्रा.लि. ले तपाईको डेटा सुरक्षित छ, भनेर सुनिश्चित गर्न सबै आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ र यस गोपनीयता नीति अनुसार तपाइँको डेटा र अन्य व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अघि कुनै संगठन वा देशमा तपाइँको व्यक्तिगत लगतको स्थानान्तरण हुने छैन ।
संशोधन वा कुनै परिवर्तनहरू सम्बन्धित कागजातहरु र अपडेट सम्बन्धि वा ति परिवर्तनहरू यहाँ स्पष्ट रूपमा पोष्ट हुनेछन् ।
तपाईंको डाटाको सुरक्षाको महत्त्व जान्नु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर याद गर्नुहोस् कि इन्टरनेटमा प्रसारणको कुनै विधि छैन वा इलेक्ट्रोनिक भण्डारणको विधि शत प्रतिशत सुरक्षित छैन । हामी तपाईको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्नको लागी काम गरिरहेका छौँ, तर हामी यसको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौं ।
तपाइँलाई हाम्रो सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि हामी तेस्रो पक्ष कम्पनीहरू र व्यक्तिहरू ("सेवा प्रदायकहरू") प्रयोग गर्न सक्दछौं, जसले हाम्रो तर्फबाट सेवा प्रदान गर्दछ, सेवा-सम्बन्धी सेवाहरू प्रदर्शन गर्न वा हाम्रो सेवा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ ।
हाम्रो तर्फबाट सेवाहरू प्रदान गर्न, यी तेस्रो पक्षहरूको तपाईंको व्यक्तिगत डाटामा पहुँच हुन सक्दछ तर अन्य कुनै उद्देश्यका लागि खुलासा वा प्रयोग नगर्न बाध्य छन् ।
हाम्रो सेवाले अन्य साइट लिंकहरु समावेश गर्न सक्दछ जुन हामी द्वारा संचालित हुँदैन । यदि तपाइँ तेस्रो पक्षको लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई तेस्रो पक्षको साइटको रूपमा सन्दर्भ गर्दछौं । त्यस साइटमा गोपनीयता नीति समीक्षा गर्न हामी तपाईंलाई कडा सल्लाह दिन्छौं ।
त्यस्ता साइटहरूमा हामीसँग कुनै नियन्त्रण छैन र उनीहरूले पोष्ट गरेको सामग्री, गोपनीयता नीति वा उनीहरूको अभ्यासको लागि हामी जिम्मेवार हुँदैनौं ।
हामी १८ वर्षभन्दा कमउमेरका ("बच्चाहरू")लाइ प्रयोगकर्ताको रुपमा उल्लेख गर्दैनौ । हामी जानाजानी १८ मुनिका कसैबाट कुनै पनि व्यक्तिगत विवरणहरू संकलन गर्दैनौं, आफ्ना बच्चाहरूलाई सचेत गराउनु अभिभावकको वा आफ्ना अभिभावकहरुको कर्तव्य हो । यदि बच्चाहरू द्वारा व्यक्तिगत डेटाको साझेदारी फेला पर्यो भने तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । यदि हामी सचेत भयौं कि हामीले प्यारेन्टल प्रमाणिकरण बिना बच्चाहरूबाट व्यक्तिगत डेटा संकलन गरेका छौं । तेस्ता विवरणहरु हामी हाम्रा सर्वरहरूबाट जानकारी हटाउनको लागि आवश्यक कदमहरू चाल्नेछौं ।
हाम्रो वेबसाइटको उपयोग गरेर तपाईं हाम्रो अस्वीकरणको लागि सहमत हुनुहुन्छ र यसका सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्छ ।